Hoe dia fitaovana zaridaina miaraka amin'ny lelam-by manify izay matetika ampiasaina hamotehana ny loto. Hoe, iray amin'ireo fitaovana fambolena tranainy indrindra, fametahana elanelana izay misy zana-kazo eo amin'ny zoro ankavanana amin'ny famitana lava. Ny lelan'ilay angady maoderina dia vy sy tahony hazo. Ny Gemlight Planting Hoe dia fitaovana iray tena nahomby tamin'ny asa fambolena sy ny zaridaina manerana ny firenena.
Ny lelan-tsolika fambolenay rehetra dia vita amin'ny vy karbona avo lenta izay entina amin'ny hafanana haharitra maharitra. Ny ankamaroan'ny vy dia avy amin'ny fako amin'ny lalamby izay ny hamafiny sy ny hamafiny, mampiasa fitaovana maharitra. Ny maranitra rehetra dia nohamafisina mba hanamorana ny fidiran'ny tany sy ny fanasoketana (fikolokoloana) ny toerana fambolena. Ny endrik'ilay ravina dia miaraka amin'ny fitomboana tsara indrindra ary hahitana fahavelomana raha toa ny rafitra faka-kazo zana-kazo nambolena dia mifototra amin'ny fandaminana “voajanahary” tsy misy fambolena, fihodinana na “faka J”. Vokatr'izany dia te-hisafidy fitaovana fambolena ianao izay hanokatra lavaka farafaharatsiny izay lalim-paka
Marika Gem Cock na B-akoho maneno Cock MODELY H302
Marika Kadiry Jewel Gemlight ara-nofo Haja karbaona avo vy amin'ny alàlan'ny Rail Way
Size 255mm * 195mm (3LB) Lanja 3LB 2.75LB 2.5LB 2.25LB 2LB
Blade Hoe Fitsaboana hafanana feno Blade Forge Type Adidy mavesatra forge iray tapa
Hoe Blade Hardness HRC32-42 Hoe Blade Surface Menaka manohitra harafesina voaravaka, ary loko miloko.
Loko Hoe Blade Mainty ny vatany, milomano ny loha Karazam-borona Maso Sunkun / Maso boribory
Hoe Blade Shape Volo mahitsizoro miaraka amin'ny famolahana kely miolaka tahony Misy 90cm Beech Wood
Blade Edge Taper fanamiana hatramin'ny sisiny manapaka Firenena nihaviana Shina
Manaraka: Mifidiana famaky
Hoe amin'ny tantanana hazo